Xiisad dagaal ayaa laga soo sheegaya Tukaraq iyo Somaliland oo hanjabtay – Radio Daljir
Janaayo 17, 2018 9:14 b 0
Wararka ka imaanaya gobalka sool gaar ahaan tukaraq ayaa sheegaya in ciidamo baddan oo Puntland katirsan kusi qul qulayaan jiida horre ee dagaal Waxaana laga cabsi qabaa in ciidamadda labada dhinac dagaal xoogan dhex marro.
Wasiirka Biyaha Somaliland Saleebaan Cali Koore ayaa faah faahin ka bixiyay dhaq-dhaqaaqyada ciidan ee ka socda qaybo kamid ah gobolka Sool, kuwaas oo u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland.
Wasiirkan oo kamid ah kuwa kasoo jeeda gobolka Sool ayaa sheegay in xukuumadda Hargaysa aysan duulaan ku ahayn magaalada Garoowe ee caasimada Puntland isla mar ahaan taana aysan ka tallaabayn xadka ay wadaagaan gobollada Sool iyo Nugal, balse qorshahoodu yahay in ciidamada Somaliland tagaan meel kasta oo looga codeeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
“Waxaad ogtihiin in doorashada Madaxweynaha Somaliland oo hadda labo bilood kasoo wareegin laga doortay; ilaa Xallin, Taleex, Tukaraq, Laascaanood, Badhan uu yahay codka dadka uu ku fadhiyo oo ay ku doorteen dadkaas iyagoo maankooda iyo maskaxdooda qaba, waana wax caalamiya oo la ogyahay sanaadiiqda aan Kacayo ka keenay ee lagu dooray Muuse Biixi, waxay ka yimaadeen meel Qardho u jirta 40KMGarowe-na u jirta 30KM ayaa dadku ka codeeyeen iyagoo maankooda iyo maskaxdooda qaba” sidaas waxaa saxaafadda u sheegay Wasiir Koore.
isku soo Wada duubo xiisada tukaraq ayaa ah mid kasi daraysa Waxaana jira baaqyo Nabadeed oo labada dhinac ee shacabka ah dirayaan,taas oo ku aadan in Nabadda laga shaqeeyo.